के छ महिमा, दुधकुण्ड पोखरीको ? (भिडियो सहित) – Himal FM 90.2 MHz
के छ महिमा, दुधकुण्ड पोखरीको ? (भिडियो सहित)
पर्यटन स्थानीय समाचार adminhimal February 10, 2019
शिखर गजरकोटे र सोनि राई
प्राचिन कालमा देवता र दानव बीच यहि कुण्डमा समुन्द्र मन्थन भएको र देवताले जितेर दिव्यरत्न अमृत लिएर गएको जनभावना रहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा प्रशस्त कुण्डहरु भेटिएपनि दुधकुण्डको महिमा गर्विलो र धार्मिक रहेकाले दर्शनार्थीको संख्या बर्षेनी बढ्दै आएको छ ।
पोखरीमा स्नान गरि फेदमा गणेशको प्राथना, अलि माथी चढेपछि तिन धारा छ । धारामा फूलपाती गरिसकेपछि पार्वती जन्मिएको स्थलको रुपमा गौरापार्वती धाममा पुजा गर्ने प्रचलन रहेको छ । ढुंगामाथी रहेको सानो पोखरीमा शिविजीलाई पुजाआजा गर्ने र बर माग्ने चलन रहेको छ ।
‘दुधकुण्ड पोखरी’ ओझेलमा
सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका १ टाक्सिन्दुमा रहेको ‘दुधकुण्ड पोखरी’को उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् । जनैपुर्णिमाको अबसरमा भव्य मेला लाग्ने पोखरीमा आवश्यक संरचनाको व्यवस्थापन हुन नसकेको हो ।
मेलाको अबसरमा हजारौ दर्शनार्थीले दर्शन गर्ने ऐतिहासिक धार्मिक स्थल दुधकुण्ड पोखरीसम्म पुग्ने सडक, होटल र शौचालयको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको हो । सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले व्यवस्थापनका राम्रा काम गरेको दाबी गरेपनि यर्थाथमा दुधकुण्ड पोखरी ओझेलमै रहेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् ।
लेक नलाग्ने व्यक्तिहरु सल्लेरीबाटै एकै दिनमा दुधकुण्ड पुग्न सकिने दुधकुण्ड मार्गमा होटलको व्यवस्था नहुदा दर्शनार्थीहरु सास्ति खेप्दै दुधकुण्ड पुग्दै आएका छन् । अहिले रिङकु सम्म सडक संचालनमा आएकाले साना सवारीको सुविधा लिन सकिन्छ । सहस्रबेनी सम्म सडकको पहूँच स्थापित गर्न सके दर्शनार्थीहरुलाई सहज हुने र दुधकुण्ड पुग्नेको संख्यामा पनि बृद्धि हुने सल्लेरीका कृष्ण निरौलाले बताउनुभयो । दुधकुण्ड पोखरीसम्म पुग्नका लागि सहज बनाउन नगरपालिकाले सहस्र बेनीसम्म सडकको ट्रयाक ओपन गर्ने तयारी गरेको टाक्सिन्दुका वडाअध्यक्ष छोङबा शेर्पाले बताए ।
दुधकुण्ड पोखरीको दर्शनका लागि पुग्ने दर्शनार्थीको सहजताको लागि भन्दै अघिल्लो बर्ष नगरपालिकाले ७ लाखको लगानीमा दुई कोठे शौचालय निर्माण गरि प्रयोगमा ल्याएको छ । गएको जनैपुर्णिमामा लागेको मेलामा पुगेका दर्शनार्थीलाई शौचका लागि सहज भएको थियो । उद्यपी, पानीको समस्या कायमै रहेकाले शौचालयको प्रयोग व्यवस्थित हुन नसकेको स्वयंम् दर्शनार्थीहरुले गुनासो गरेका थिए । धार्मिक स्थल दुधकुण्डको प्रचारप्रसारमा नगरपालिकाले वृत्तचित्र तयार पारेको छ । यस अघि पनि रेडक्रस सोसाईटी लगायतका संस्थाले दुधकुण्डको वृत्तचित्र निर्माण गरिसकेका छन् । दुधकुण्डको गरिमा अनुसार प्रचार र व्यवस्थापन हुन नसकेको लौरेश्वर बाबाले गुनासो गरे ।
भिडियो हेर्न र सुन्नका लागि –